‘कोरोनाको औषधि बनाएँ, संक्रमितले पत्याए अरू वास्तै गर्दैनन्’ – Sidha Onlinepatra
रमेश प्रसाईको श्रीमति बच्चाको आमा बन्दै, बधाई दिन नन्दाकै आश्रममा पुगे अन्जुका दम्पत्ति! (भिडियो हेर्नुस्)
बुटबल– भैरहवाका आयुर्वेदाचार्य डा. बद्री गौतमले आफूले तयार पारेको जडीबुटी औषधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी निको भएको बताएका छन् ।उनले आफूले बनाएको औषधिको नाम ‘अर्कबटी’ राखेका छन् । तीन दशकदेखि जडीबुटीमा अनुसन्धान गर्दै आएका आयुर्वेदाचार्य डा. गौतमले कोरोना संक्रमित १५३ जनाले उक्त औषधि सेवन गरेकोमा १३५ जना निको भइसकेको बताए ।
२५ सय वर्षपहिले अत्रि ऋषिले पत्ता लगाएको सूत्रअनुसार श्वासप्रश्वास र पाचन नलीमा हुने रोग निको पार्न प्रयोग गरिएको जडिबुटी नै कोरोना भाइरसको औषधि बन्नसक्ने ठानेर सोही विधिअनुसार औषधि तयार पारेको डा. गौतमले बताए । निजीरूपमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ‘अर्कबटी’ आयुर्वेदिक औषधि तयार पारेको उनको भनाइ छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कोरोना भाइरस देखिएपछि उनले औषधि बनाएर प्रचार नगरी चिनेका साथीहरूलाई दिए । उनीहरूलाई ठिक भयो । भारतबाट आएका आफ्ना साथीहरूलाई पनि दिए । सबै निको भए, माग बढदै गयो ।डा. गौतमले भीम अस्पताल, भैरहवामा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई निःशुल्क वितरणका लागि आफ्नो औषधि पठाए । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टाईलाई पनि औषधि पठाए । तर, उनीहरूले वास्ता गरेनन् ।
पछि उनले पाएको जानकारीअनुसार अस्पतालका चिकित्सकहरू अप्रमाणित औषधि बिरामीलाई दिन तयार भएनन् ।डा. गौतम जडिबुटी सहकारी लिमिटेडअन्तर्गत काम गर्छन् । जडीबुटीबाटै देश समृद्ध बनाउनुपर्छ उनको अभियान छ ।उनी २०६८ सालदेखि ‘त्रयम्बकम्य जडिबुटी सहकारी’ मार्फत अनेक प्रजातिका जडिबुटीको प्रवद्र्धन, संरक्षण र अनुसन्धानमा छन् ।
महामारीमा पनि सरकारले किन खुलाउंदैछ वैदेशिक रोजगारी ?
असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारीमा पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी